Ithegi: ukuthengisa okujolise kublowu | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa okujolise kublowu
NgoMvulo, sabelane nge-infographic evela kwi-Blue Focus Marketing, iBrand yakho njengePlanethi, enika ubungqina kunye nesifaniso esilula esithetha ngamandla okusebenzisa abasebenzi bakho ukukunceda ukuba ukhule kwimithombo yeendaba zentlalo. Iya ngaphaya kokubonisa uphawu lwakho, nangona kunjalo, njengoko uza kubona kwi-infographic yabo entsha. Njengoko sichaza kwincwadi yethu ethengwa kakhulu eAmazon, Abasebenzi bezeNtlalontle: Iinkampani eziNtle kangakanani ezenza iMithombo yeendaba yezeNtlalontle ukuba kungabikho mpazamo
Sasonwabile xa sabona wonke umntu ekuhlaleni kunye nokukwazi ukusebenzisa abasebenzi bakho ukunceda ukwandisa ilizwi lenkampani yakho kodwa sothuswa yindlela ezithe cwaka ngayo iinkampani ezininzi. Siyaqonda ukuba abanye abasebenzi abanxibelelananga, kodwa xa sibona iimpendulo zivela kwinkampani enamakhulu abasebenzi, siqala ukuzibuza ukuba yintoni enye enokuba iphosakele. Kubasebenzi beNtlalontle: Zingaphi iiNkampani eziNkulu ezenza iMithombo yeendaba yeNtlalo